Admin | GURIGA HAWEENKA | Page 71
Home » Author Archives: Admin (page 71)
Su’aal:Haraad aan habeenkii hurdada uga soo tooso !! ?
Admin October 30, 2016	Heath, MAXAA CUSUB 4,439 Views
Waxa ugu badan ee keena in aad adigoo aad u ooman hurdada ka soo toostid waa haddii aad ka mid tahay dadka iyagoo hurda afka u kala furan yahiin, taasi waxay keentaa af qallayl iyo dhuun angag, qofkane wuxuu la soo toosaa oon badan oo ay dhibayso xitaa inuu candhuufta liqo. waxyaabaha keeno in aad afka ka neefsatid waxaa ugu horeeya in sanka uu xiran yahay sida in hilib ku yaallo oo kale, akhriso qoraal ku saabsan hilibka ka soo baxo sanka: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5630.0
Midda 2-aad oo aad loogu arkane dhulalka qaboobaha, waa haddii qolka aad jiiftid ay ku yar tahay hawada Oksajiinta, maadaama guriga loo shido kululeyso ama “heater” si qabowga loo yareeyo, tan waxay keenaa hawo qallalan oo diirran, waxaadne dareemi kartaa oon badan markii aad dhowr saacadood jiiftid oo oksajiintii badankeed ay gudaha guriga ay ku yaraatay, wuxuu kaloo qofka la soo toosi karaa madax xanuun. cilladaan badanaa laguma arko dhulalka kuleelaha, maadaama hawada aysan ka xannibneyn guriga.
Midda 3-aad, waa cillada “naqas-ku-dhagga ee hurdada la socoto”, tan waxaa loo yaqaanaa “Sleep apnea”, horay ayaan uga hadalnay qoraal faahfaahsan ee ka akhriso halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5558.0
Midda 4-aad, waa in aad iska baartaa xanuunka macaanka oo astaamihiisa ka mid ahaan karaan af-qallaylka iyo oonka lala soo tooso, inkastoo dadka qaarkiis ay dareemaan kaadi badan habeenkii, laakiin way dhici kartaa in aadan kaadi u soo kicin.
Midda 5-aad waxaa la arkaa haddii aad ku cashaysid cunno ay cusbada ku badan tahay, tan waxay keentaa in unugyada jirka ay oomaan, laakiin ma ahan wax aad habeen kasta dareemi karto maadaama ay ku xiran tahay cunnada aad cuntay.
Midda 6-aad waxay ka dhalan kartaa haddii hurdadaadu ay qaraw iyo calwasaad ay u badan tahay, waa arrin ka timaado kacsanaanta jirka iyo niyadda, akhriso qoraal aan uga hadlay cilladahaan hurdada lagu arko: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2419.0
Midda 7-aad waxaa keeni karo daawooyinka qaarkood, khaasatan qaar ka mid ah kuwa hurdada loo adeegsado sida “Amitriptyline” iyo kuwa kalaba.
Sidee ku ogaan karaa cilladayda nooca ay tahay?
Ku dadaal in aad adkaarta iyo ducada hurdada aad akhrisatid si aad uga badbaadid wixii hurdada kaa qasi kara oo qaraw iyo calwasaad ah.
Isku day in aadan cunin cunno cusbada iyo dufanka ku badan tahay inta aadan jiifanin.
Ku dadaal in qolka aad jiifanaysid uu helo meel hawada ay ka soo gasho kana baxdo, wejigane ha daboolan marka aad jiifanaysid.
La xiriir dhakhtar si loo hubiyo in aadan qabin macaan, cabburka sanka, xiiqda iyo naqas-ku-dhagga hurdada.
Iska hubi daawada aad isitcmaashid inaysan lahayn waxyeello af-qallayl iyo oon badan.
Sheeko Jaceyl Ah Oo Aad U Xiiso Badan Lana Magac Baxday Illaa Weli Waan Ku Sugayaa…(Qeybtii Koowaad)
Admin October 30, 2016	Lamaanaha, MAXAA CUSUB 2,056 Views
Waxaa taxane inoo ah qiso jaceyl ah taasoo aad ka daalacato shabakada Sheegenews.com xiliga afurka qaarada afrika.
Qisadan waxey noqon doontaa qiso aad ka daalacataan shabakada Sheegenews.com xiliga afurka qaarada Yurub.
Billoowga Qeybtii koowaad “Illaa Weli Waan Kusugi”..
Waa habeen xusuus mudan qofkasto oo ibnu aadam ahna uu ku qasban yahay in uu qoro ama uu xuso dhibatooyinka iyo qisooyinka ku dhaco haddii ay ahaan lahaayeen jaceyl sida tanoo kale ah ama farxad iyo kuwa kalaba.
Wuxuu ahaa wiil aad u d’ayar oo dhalinyaro ah markaasna soo kacaya oo indhu ay u furmayaan,sanadku waa 1997,waa waqti aad u fog toban-iyo todobo sanadood ka hor, habeen habeenada ka mid ah isagoo fadhiya darjiin isaga iyo will ey saaxiibo ahaayen, ayaa si lama filaan ah waxaa meesha soo martay gabar aad u qurux badan oo uu u bogay oo runtii uusanba arag ka hor iyadoo kale, gabadha Ilaahey qurux waa u dhamey kaaga darane jooga,laafyaha,waxaa intaas oo dhan kaga sii cajiibsanaa muuqlkeeda guud oo cajab-galiyeyba!.
Waxey ahayd labo saac xiliga laga soo baxay cishaha,magaaladu waa muqdishu,xaafaduna waa (Suuq bacaad) waana xaafada uu ku dhashay kuna soo barbaaray waligiisana uu daganaa! laakiinse horey uguma uusan arag gabadhaas kor hor!?? Wiilka waxaa lagu magacaabi jiray Daahir,halka gabadhana laga odhan jiray Ugbaad.
Ugbaad,markii ay xooga dhaaftay walina ay u sii muuqato kana libdhin wali ayuu daahir ku yidhi saaxiibkiisa Mahad,saaxiib fadhi iima yaalo caawa ee ina kici waa inaan gabadhaas soo qabtaa,waala isa soo raacay wixii la soo daba socodaba nasiib wanaag waala soo gaadhay,
Markii lala simanyahay ayaa waxaa hadalka bilaaway Daahir kaaso yidhi : (Walaashey wax yar naga raali noqo waxaan nahay akhyaar ku cusub xaafadan oo u yimid tacsi dad qaraaba ah oo dhintay, dad badana kama naqaano ee xaafadan miyaad dagantahay horta oo mana caawin kartaa?
Waa hadal iyo bilowgiisa waa meesha ay sheekadu ka bilaawatay oo ay magacaana kula baxi doonto(ILAA WALI WAN SUGI).Ugbaad ayaa hadalkii qaadatay oo tidhi haa waa idin caawin karaa ee dadka aad rabtaan xagee daganyihiin? waase ina aayo?Intaas kadib daahir wuxuu u sheegay reer aysan aqoonin ugbaad ileen isgaa xaafada ku dhsahay ugna aqoon badnaa, ujeedkuna maba ahayn in ay rabeen caawinad iyo wax la mid ah ee waxey lahaayeen dan ka weyn taasoo ahayd in socodka lasii wado ilaa laga ogaanayo guriga ay dagantahay Ugbaad!.
Markii xoogaa la socday oo sheekada hadab dhinac la iska siinayaba,waxaa la soo gaadhay gurigii Ugbaad,waxeyna tidhi aboowe aniga xaafadayda ayaan galayaa ee bye!.Halkaa marka ay mareyso walina aysan dhaqaaqin ugbaad ayuu daahir ku yidhi waad mahadsantahay abaayo.
Waxaa tahay gabar wanaagsan oo na caawisay ee suurtagal matahay in aad noo sheegto magacaaga ? ana magacayga waxaa lay dhahaa(Daahir),wiilkaan waa saaxiibkeyga Mahad!.
Waxay u sheegtay……………..
La Soco Qeybaha Danbe Maalinta Beri Ah
Wiil Yar Oo Xal u Helay Dhibaato ay Diyaaraduhu Aad Uga Caban Jireen…
Admin October 30, 2016	MAXAA CUSUB 1,196 Views
Wiil yar ayaa markii ugu horeysay cilmibaadhis ka sameeyey dhibaato ay in badan ka caban jireen diyaaradaha kala duwan ee u kala goosha caalamka, kaas oo in badan ay culimada dhanka caafimaadkuna isku dayeen inay xal u hayaan laakiin ay u waayeen.
Dhibaatadan ayaa ah Jeermiska dadka kala duwani ay sidaan ,kaas oo ay isu gudbiyaan marar badan ,sidoo kalena diyaarada lafteeda dadka ka shaqaynayaa ay ka cawdaan inay dhibaato kala kulmaan.
Wiilkan ayaa sameeyey computer si fudud loogu ogaan karo in qofkasi uu Jeermis sido iyo in kale , kaas oo haddii uu qofkaasi Jeermis sido si fudud u sheegaaya , iyada oo lasii dhex marinaayo , waxaanu bixinayaa laydhadh kala duwan marka uu sheegaayo .
Wiilkan oo lagu magcaabo Raymond Wang oo da’diisu jirto 17 sanno waraysi dheerna siiyey wargeyska Daily Mail oo uu warbixintan kazoo xigtey kobciye.com ayaa sheegay in uu qalabkan ikhtiraacay kadib markii uu muddo ku daba jiray daraasadna ku samaynaayey sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadan diyaaraduhu ka cabanayaan .
Waxaanu sheegay in Computer kani uu ku rakiban yahay qalab u samaysan sida qalabka hubka lagu baadho ee madaaradda yaala, isaga oo laydha casaan ah bixinaaya haddii uu qofkasi yahay mid Jeermis xambaarsan ,haddii kalena uu laydh akhtar ah bixinaayo.
Waxa kale oo uu intaas raaciyey in uu hadda samaynaayo qayb cusub oo uu doonaayo in lagu ogaan karo Bacteria-da jidhka qofka ku jirta ama saaran ,.
Dhibaatada xanuun gudbiyahan ayaa ah dhibka ugu weyn ee haysata dadka diyaaradaha kexeeya , iyada oo ay rakaabka ka qaadaan xanuuno uu duraygu ugu badan yahay , kaas oo keena in mararka qaar uu qofka Baylodka ahi sii wadi kari waayo duulimaadyadii.
Mr Wang ayaa rajaynaaya inuu ku guulaysto inuu joojiyo fiditaanka xanuunadaasi waqtiyada diyaaradaha lagu jiro ama duulimaadyada lagu jiro.
Sidoo kalena Computerkan ayaa wata marawaxado yar yar oo qof walba meeshiisa loogu xidhaayo , taas oo hawada ay dadku isu gudbinayaan kala firdhinaysa , taas oo laga yaabo inay meesha ka saarto germs kii hawada laysugu gudbinaayey.
Mr Wang ayaa sheegay in uu fikirkan ku abuuray kadib markii sannadkii 2015 uu meelo badan oo Afrika kamid ah ka dilaacay xanuunkii Ebola , kaas oo laayey dad aad u badan , sidoo kalena waxa iyaduna kamid ahayd waxyaalaha ku keenay fikirkaasi kadib markii uu meelo Aasiya kamid ah ka dilaacay xanuunkii Durayga Shimbiraha oo isna dad badan laayey.
Xanuunadan ayaa qaarkood haayeen kuwo laysugu gudbinaayey socdaalada dhanka hawada ah , waxaanu sheegay in intooda ugu badani ay ahaayeen kuwo marka uu qofku hindhiso u gudbaayey dadka kale ee hareerihiisa fadhiya ama jooga ,sidaasna ay dad badani xanuunadan ku qaadayeen.
Hadii Aad Su;aalahaan Jawaab U Hesho Waxaad Garatay Sidee aad Ula Noolaan Laheyd Xaajigaaga.
Admin October 30, 2016	Lamaanaha, MAXAA CUSUB 2,390 Views
Haween badan ayaa ku jahwareersan in ay guul ka gaaraan in ay xog badan ka helaan qaabka ay ula tacaamulayaan seygooda taasina ay sabab u tahay faham daro ku aadan xog aysan ka hayn waxa ay ku leedahay iyo waxa uu xaq ahaan ugu leeyahay .
Sababtoo ah xaqa laguugu leeyahay waa uu badan yahy hadaba Zowja waliba ee rabta in uu guurkeeda noqdo naajix waa in ay dib u daraaseysaa dhaqankeeda , waliba ayadoo la kaashaneysa sayigeeda oo weydiinaysa waxa uu jecelyahay iyo waliba waxa uu naceb yahay.
Ka dib si ay u hesho qaacida ay wax ku dhisto. waana in ay ku cadeecdaa wax walba oo aan ilaahay loogu caasinayn.
Marka hore isweydii su`aalahan :-
1-ma is weydiisay waxa uu xaq kuugu leeyahay zowjkaada?
2-maxaase lagaaga baahan yahay in aad u sameyso?
3-ma isku dayday in aad wax ka badasho dabeecadii uu kuula yimid ama dhaqankii uu kala yimaaaday gurigii hooyadis?
4-mase isweydiisay in dalabaadkaagu xad leeyihiin ?
5-mase ku saaciday waxa uu u baahan yahay in lagu saacido?
6-ma isku dayday in aad ka fogaato waxyaabaha aad isleedahay waa ay dhaawacayaan qalbigiisa?
7-ma isweydiisay in aad ihtimaam siisay ?.
Ogaw hadaad su`aalahaan jawaab u heshay guusha waad gaartay , aqristoow fikirkaada wa inoo muhiim.
Umuurtasi waxa ay keentaa in si fudud uu u dumo qoyskii ,iyadoo ay haboonaan laheyd in marka hore labada dhinac ogaadaan waxa ay isku leeyihiin gaar ahaan in dumarka si rasmi ah u ogadaan waxa lagu leeyahay .
Hadaba haddaad su`aalahaas jawaab u hesho micnuha waa aad garatay sida aad ula tacaamulilahayd sayigaada.
W/D: Mohamed Abdikadir ilmi Amoore
Nin aad u Maseyr kulul oo aan u ogoleyn shukaansi iyo guur xaas ay kala tageen? !!!
Admin October 30, 2016	Ila tali, Lamaanaha, MAXAA CUSUB 2,098 Views
Sheekadan waxaa qoray : Abuukar Salaad Diiriye “Fareey”.
Waxa ay ku bilaabatay sidatan :
Adduunyada waxa aan ugu necbahay naag aan furay ninkii wax iga weydiiya halkeey ku danbeeysay.. waxaase weliba iigu si daran… kuyeh… kii i sii weydiiya meel laga heli karo sida teleefoonkeeda ama haddii ay leedahay cinwaan lagala xariiro.. sidaas waxaa igu yiri nin lagu magacaabo Jaamac dheere oo ii sheegay inuu la dhiban yahay maseyr daran.
Jaamac dheere, waxa uu igu yiri, dadka waxaan u jeclahay qofkii, xaaska aan kala tagnay ii soo sheega jabkeeda sida waa macluushay,,, waaa kuu darsatay.. waa qayirantay.. gadaashaa waa waalatay ayaan ka sii jeclahay !
Jaamac oo warkiisa sii wata, waxa kale uu yiri, waxa aan naxaa marka aan maqlo caawa ayey aqal-galeysaa iyo nin hebel oo aan garanayo ayey is shukaansadaan.
Waa iga yaabiyey ninkaas … waxaana u aqoonsaday inuu yahay xaasid weyn…. waloow aysan aheyn wax sahlan beer ama aseendo aad lahaan jirtay oo lala wareegay !
Walaal Ma isu diyaarisaa wakhtigaaga caadada (dhiiga) Talooyin Ku Anfacaya
Admin October 30, 2016	DOORKA-HAWEENKA, Heath, MAXAA CUSUB 4,945 Views
Waxaa wax aan laga maarmin ah in gabdhu ay markasta diyaar u tahay isoona sii diyaariso wakhtiga ay u imanayso caadadu. Sida aad isoogu sii diyaariso marka saaxiibadaa ay kusoo booqanayso ama qof muhiim ahi, waxaa kasii muhiimsan in aad diyaar usii tahay 5-7 maalmood ee ay kuu imanayso martida ugu wanaagsan ee kusoo booqata bilkasta maalmo kamida. Caadadu waa shayga aadka muhiimka ugu ah dumarnimadaada, hadaba ma isu sii diyaarisaa maalmahaa qaaliga ah, mise waxaad tahay habalaha uu kusoo gaadho si filan waa ah iyagoo suuqa dhex jooga. J
Waxaa lagama maarmaan ah inaad si ay tahayba aad diyaar usii tahay maalmahan hadii aad joogto magaalo ama tuulaba. Sidan hoos ka muuqata ayaa ah siyaabaha ay isoogu diyaariyaan gabdhaha qiimeeya maalmahani.
Hadii aad haysato mobilka casriga ah soo rogo app, waxaa jira kuwo aad u badan oo bilaasha oo kuu sheegaya wakhtiga ay kuu soo socoto caadadu, kuna xasuusinaya maalmaha kala duwan iwm.
Waxaa hubaala in gabadhkastaa ay leedahay boorso (shandad) ay ku xaragooto, haba qiimo yaraatee. Maxaa kuu diidaya markaa in boorsadaada aad ku sidatid markasta qalabkaaga, si aad uga dheeraato filan waaga joogtada ah.
Muhiim maaha in qofkasta oo guriga kugula nool inuu ku ogaado maalmahaagan khaaska ah, hadii aad tahay hablaha cusub ogow in aad ka dhigato maalamahan kuwo adiga kuu khaasa. Waxaa jira dadka qaar inay ka wiswisaan gabadhu marka ay caadada qabto, iyadooyna fiicnayn sidani, hadana ha u siin fursad cidna inay ogaadaan meesha aad dhigto iyo meesha aad ku rido tamponka marka aad iska badasho.
Wax ka baro oo isu sii diyaari xaaladaha aad marayso wakhtiga caadad iyo ka horba. PMS waa arin nafsaaniya oo ay galaan dumarku marka ay caadadu usoo dhawdahay hadaba wax ka akhriso si aad u barato naftaada.
Hadii ayna dantu kuu saamixin waxa aan hore usoo sheegay, isku day inaad qorto maalinta ay caadadu kugu dhacaday si aad usii ogaato goorta ay kugu soo dhowdahay.
Waxaad Isiisaa Wax Ku Jira Gudaha Jidhkaaga! Qiso Aad Iyo Aad Cajiib U Ah..!!
Admin October 29, 2016	Ila tali, Lamaanaha, MAXAA CUSUB 5,284 Views
Nin xakiim ah ayaa isagoo safar ku jira helay dhagax macdan qaali ah. Isagoo dhagaxii sita ayay nin kale oo isna safar ah kulmeen oo aan wax raashin ah sidan. Ninkii xakiimka ayaa shandadiisa furay oo raashinkiisa wax ka siiyay ninkii safarka kula jiray.
Ninkii ayaa arkay shandada xakiimka dhagaxa qaaliga ah ee ku jira isagoo garnayay qiimaha dhagxaasi, ka dibna xakiimka ayuu weydiistay inuu siiyo dhagaxaasi?
Ninkii xakiimka ahaa isagoon jawaab ku celin ayuu siiyay oo ku yidhi “ Qaado waa dhagax macadan qaali ahe”. Ninkii ayaa tegay isagoo aad ugu faraxsan dhagaxan qiimaha leh ee uu siiyay oo noloshiisa oo dhan ku filan.
Markii magaalada uu la yimi ee si rasmi ah u ogaaday qiimaha dhagaxa , ayuu dib ugu noqday ninkii xakiimka ah ee siiyay waxaan uu ku yidhi. “ Waad ogayd aniguna waan ogaaday qiimaha qaaliga ah ee dhagaxan, haddana si fudud ayaad markiiba ii siisay. Markaa anigu ma rabo dhagaxii ee qaado waa kane.
Laakiin waxaan ka codsanaya inaad isiiso waxa gudahaaga ku jira ee kuu ogolaanaya inaad bixiso shay sidan qaali u ah? Sidaasi ayay dadka xikmada lihi ay qiimo ugu leeyihiin dadku laakiin aanay qiimayn alaabooyinka si kasta oo ay qaali ugu yihiin.
Axkaamta Uu Leeyahay Shukaansiga Iy Labadii Ku Dhaqantaa oo Mustaqbalkoodu Wanaagsanaado
Admin October 29, 2016	Lamaanaha, MAXAA CUSUB 4,519 Views
Shukaansiga:- Waa Wiilka Guurdoonka ah oo Rabitaan u muujiya Gabadha aan weli la Guursan, ka dibna ay Gabadhu Aqbasho amase Waalidkeedu.
Shukaansigu Guur ma aha, waxbana ma Xalaaleeyo, keliya waa Ballan iyo isla Ogalaansho in Mustaqbalka la is Guursado kaliya oo lagu Heshiinaayo.
Xukunka Shukaansigu waa Banaan yahay marka uu ku Saleysan yahay Waddadii Sharciga ahayd ee ay Diinta islaamku u jeexday.
Shukaansiga Sharciga Waafaqsan Wiilku intuu ku Guda jiro waxaa u banaan inuu arko Gabadha, si uu ugu Qanco Bidhaanteeda, isaga oo ka Fiirinaya Wejigeeda iyo Gacmaheeda inta hore.waxaa kale oo ay Culimadu baneeyeen wixii Hadal Wanaagsan ah ee welibana Danta keento sida Iney kawada Tashadaan Qaab Guursigooda iwm.
MAXAA KA REEBAN MUDDADA SHUKAANSIGA LAGU GUDA JIRO ?
Waxaa ka Reeban muddada Shukaansigu socdo ama Khidbada lagu jiro Arimahan soo socda:-
1- inay kaligood Cidla isugu yimaadaan.
2- inay ku Sheekaystaan Hadalo aan Wanaagsaneyn oo ka Reeban Dadka Ajnabiga kala ah.
3- waxaa ka Reeban iney Sawiraan ama Hadalo ama Qoraalo iyo wax kasta oo Kicinayo Dareenkooda isu soo diraan.
4- Waxaa ka Reeban iney is Taabtaan amase is Dhunkadaan iwm.
5- Waxaa ka Reeban inuu Badiyo Kulamada iyo Booqashada aan loo baahneyn.
6- Waxaa ka Reeban wax kasta oo u soo jiidaaya Xaaran.
7- Aragtida Wejiga iyo Gacmaheeda inta hore ayaa u Banaan laakiin inuu ka arko meel kale uma banaana.
8- Gabadhu ha Ogaato mar kasta oo uu Wiilkani Dhawrsoonaan ku arko inuu sii jeclaanayo, markasta oo uu ka Dareemo iney tahay mid wax Maceshato ahna inuu u Bedalaayo ku meel gaar.
9- waxaa ka Reeban inuu Shukaansado Gabar kale oo Wiil u doonan, waana Arrin aan Banaaneyn Sharci ahaan intey is Fahmeen ka dib.
10- Uma Haboona inuu Wiilku kaga baxo Gabadha Ballanka intey Heshiiyeen ka dib, Haddii uunsan ku arag Ceeb uunsan Filanaynin.
Ugu dambayn waxaan Oran lahaa Labada Qof ee is Rabta iney is Guursadaan oo ay dhisaan Guri Muslim ah iney ilaaliyaan Shareecada Islaamka Xuduuda ay u dhigtay, kana Fogaadaan wax kasta oo aan Banaanayn, taasoo u soo jiidi karta Carro Eebe iyo Cirib xumo.
Shukaansiga aan ula jeedo waa midka Waafaqsan Shareecada Islaamka ee aan ka soo Hadalnay ee la Macnaha ah Khidbada, ee yaan loo qaadan sida Maanto loo Isticmaalo ee Qaladka ah.
Fiitamiinada iyo faa’iidoyinka Caafimaad
Admin October 28, 2016	Heath, MAXAA CUSUB 1,308 Views
Fiitamiinada waxa uu jidhku ugu baahan yahay si ay uga qayb-qaataan korriimada iyo nolol caafimaad leh, maadaama uusan jirkeenu samayn karin fitamiin waxaan u baahan nahay inaan cuno ama cabno walxaha ay ku jiraan, la’aantoodna jirku uu noqonayo hawl-gab.
waxaana jira noocayo badan ay ka mid yihiin vitamin A, C, D, E, K, iyo vitamin B oo ka kooban qaybo badan oo ay ka mid yihiin B1 ilaa B12, inta badana waxaad ka heli kartaa cuntooyinka kala duwan ee aad cunto.
Laakiin ogow sida markay ku yar yihiin jirka ay dhib u keenaan ayay sidoo kale markay ku bataan qaarkoodna dhib u keeni karaan, gaar ahaan qofka waqti dheer kaniiniyo qaadanayay.
Haddii aad uur leedahay ama aad qorsheynaysid, ha qaadan fitamiinada ay ku jiraan fitamiin A ama cunooyinka uu ku badan yahay sida beerka sababtoo ah in badan oo fitamiin A wuxuu dhib gaarsiin karaan ilmaha uurka ku jira.
Dadka badankiis uma baahna inay qaataan kaniiniyo haddii cunadoodu ay tahay mid dheeli-tiran ayna ku jirto khudaar iyo furuuto ku filan.
Waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay kaniiniga qaataan dadka qaarkiis gaar ahaan dumarka uurka leh, waayeelka iyo qofkii cunadiisu aysan dheeli-tirnayan.
waxa jira Fiitamiino jidhkaagu samaysan karo oo ay ka mid yihiin Vitamin D iyo Vitamin K.
Nooc kasta oo Vitamiin ah waxa uu qabtaa shaqo gaar ah oo hadii uu kugu yaraado ay kugu iman karaan cuduro tusaalo ahaan.
Vitamiin B groups (B1 ilaa B12), waxay lagama maarmaan u yihiin
·Ilaalinta caafimaadka maqaarka iyo xuub axaleedyada
·Sameynta unugyada dhiigga cas cas (RBC)
·Caafimaadka nudayaasha dareen-wadka Haddii uu yaraado Fiitamiinkani waxa uu keeni karaa koritaanka ilmaha oo liita, carrabka oo xannuun ku yimaaddo, qofka waxaa ku dhici kara dhiig yari, waxaa kaloo qofka ku dhici kara dhibaato xaga neerfayaasha, waxaana laga helaa Fiitamiinkan midhaha oo dhan, caanaha, hilibka, beerka iyo kalyaha.
Vitamin C waxa uu fiican yahay
· Raysashada dhaawacyada
· Caafimaadka maqaarka
· Caafimaadka xuub axaleedyada sida cirridka. Haddii uu yaraado raysashada dhaawacyada oo liita, afka iyo cirridka oo si fudud u jirrada waxaana laga helaa Fiitamiinkan midhaha Fareeshka ah oo aan la karkarin sida liimooyinka kala duwan iyo midhaha canabka.
Vitamin A waxa uu lagama maarmaan u yahay caafimaadka indhaha haddii uu qofka ku yaraado waxaa ku dhici kara caafimaad xumo xagga indhaha ah waxaana laga helaa caanaha, subagga, beedka, caleenta cagaaran.
Vitamin D sidoo kale waxa isna u fiican yahay habsami u shaqaynta ilkaha iyo lafaha haddii la waayana waxaa qofka ku dhaca cudurka loo yaqaano Rickets oo ah cudur lafaha lugaha qalqaloociya waxaana laga helaa caanaha, subagga, kalluunka, iyo beedka.
Viatamin K, waxa u muhiim u yahay xinjiraynta dhiigga; hadii uu qofku waayana waxaa ku dhici kara dhiig bax, waxaana Fiitamiinkan laga helaa caleenta cagaaran iyo kaarootka.
Vitamin E, waxa uu ka qayb qaataa xaga taranka hadii uu qofka ku yaraadana waxay dhibaato kaga timaadaa xaga taranka waxaana laga helaa khudaarta cagaaran, caanaha, iyo kalluunka.
Haddaba waxaa muhiim ah inaad hesho cunto isku dheelitiran si jidhkaagu u helo caafimaad wanaagsan oo aad sidoo kale uga badbaaddo cudurrada ku yimaadda nafaqa xumida
RAG & DUMAR:Maxaa keena in uu Dhabarka Ku Xanuuno Fadlan AKHRISO Qoraalkaan
Admin October 28, 2016	Heath, MAXAA CUSUB 9,098 Views
Cudurka dhabar xanuuka ayaa ah mid ay ka sheegtaan dad fara badan haba u sii badnaadeena dadka ka shaqeeya xafiisyada cudurkaan ayaa waxaa keena shan arrimood oo muhiim tahay iney iska ilaaliyaan dadka waxaanka ka mid ah.
Fadhiga dheer. Fadhiga dheer waxaa uu keenaaa in uu qofka muddo ka dib inay murqaha ay fuulaan culeys faro badan taasoo keenta murqo xanuun iyo iney togmaan murqaha jirka waxaana looga hortagi karaa inuu qofka uu joogteeyo jirdhiska sida inuu socdo.
Dhaqdhaqaaq yari. Dhaqdhaqaaq yarida waxay keentaa ama uusan qofka inuusan dhaqdhaqaaq badan uusan sameyn waxay sababi kartaa iney jilcaan qofka murqihiisa waxaana looga hortahi karaa inuu qofka sameeyo sida dabaasha iyo socodka.
Miisaanka tirada badan . miisaanka tirade badan ama cayilka xad dhaafka waxuu keenaa iney qofka murqihiisa ay xirmaan sid guud ahaan tassoo sidoo kale waxay keentaa inuu qofka uu dareemo xanuuno , sidaas daraadeed waxaa laga maarmaan ah in uu qofka dhimo miisaankiisa.
Walwalka nafsadda. ama walbahaarka. Walwalka iyo walbahaarka badan waxay keenaan xanuun badan oo jirka ah taasoo sababto iney qofka murqihiisa iyo jirkiisaba ay togmaan waxaana looga hortagi karaa inuu qofka inuu nasto sida inuu qubeysto oo meel leery leh uu seexdo.
Qaadista waxyaabaha culus. Qaadista wax yaabaha culus waxay ka turjumaan ama ay ka dhiganyihiin iney dhibaato ku abuuraan murha jirka oo daciifka ah ku waas aan ubaran iney wax culus qaadaan sidoo kale qaadista waxyaabaha culus waxy keenaan inuu qofka uu dareemo dhabar xanuun badan.
Sidaas daraateed waxaa dadka lagula taliyaa ineysan dhabarka aysan ku qaadan boorsooyinka waaweyn oo ay ku qaataan gacmaha si loo ilaaliyo caafimaadka qofka , iyo inuu dheelistir ku ameeyo waxyaabaha uu qaadayo .
Page 71 of 81« First...405060«6970717273	»	80...Last »
DAAWO: Gabar 10 sano jir ah oo dhashay ilmo nool taasoo la kufsaday 7-bil ka hor…
TOP-Naasaha iyo Qaabka ugu sahlan ee Lagu Adkeyn karo markii aay kaa jilcaan
VIDEO:She looks 10 years younger with this simple ingredient – Petroleum Jelly Benefits
DAAWO-Wejiga Fa’idada u uleyahay Vaseline Iyo Barashadeenii Nadafada Jirka +video
4 HAB Oo Loola Qabsado Gabdhaha Shidan Ee Aad Kula Kullanto JIIMKA
TOP-Lamaanaha is qaba ee Sariirta Wadaaga iyo Caafimaadka
VIDEO:Qurxinta Wajiga Xiliga Kuleelah ah (DIY sun protection face mask) |
Haweenay lagu qasbay inay Xjiaabka tuurto oo magdhow ahaan loo siiyay kumanaan Doolar
Sheeko yaab leh: Nin Soomaali ah oo kellidiisa laga soo saaray 700 oo dhagax ah
Waxyaabaha minka lagu xiro (looyaqaano aneelo)
Kaniiniga ka hortaga uurka